"Jesosy … niandrandra ka nanao taminy hoe: …Tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao Aho anio. Lioka 19. 5 Izy (Jesosy) … niditra tao amin’izay nisy an-drazazavavy. Dia nandray ny tànan-drazazavavy Izy ka niteny taminy hoe: … Ry zazavavy, hoy Izaho aminao: Mitsangàna. Dia nitsangana niaraka tamin’izay razazavavy ka afa-nandeha… Ary niaraka tamin’izay dia talanjona indrindra ny olona." Marka 5:40,41
Tamin’ny andron’i Elisa mpaminany dia nisy vehivavy manan-karena iray. Hitany fa io mpaminany io dia “lehilahin’Andriamanitra”, ary nampiantranoiny. Noreseny lahatra mihitsy aza ny vadiny hamboatra efitrano kely manokana ho azy. Tsy nanan-janaka anefa io vehivavy io, koa satria hitan’i Elisa ny alahelony, dia nampanantenainy ravehivavy fa hiteraka zazalahy.
Teraka ilay zaza ary nihalehibe. Indray maraina izy dia nitaraina marary andoha. Nony mitataovovonana dia maty teo ampofoan-dreniny ilay zaza. Inona no hataon-dreniny? Hitomany sy handevina ilay zaza ve? Tsia!
Nampandriany teo am-parafaran’ilay mpaminany ny zaza. Avy eo io vehivavy be finoana io dia lasa nitady ilay olona hany afaka hanampy azy, dia i Elisa, ilay lehilahin’Andriamanitra. Toy ny niteny izy hoe: «Raha ianao no nanome anay io zaza io, dia tsy azonao avela ho faty izao izy. Tsy maintsy mikarakara azy ianao». Dia nangatahiny fatratra i Elisa mba ho any an-tranony, tsy misy hataka andro. Nalefan’i Elisa aloha ny mpanompony, saingy tsy nahay namelona ilay zaza. Nony tonga i Elisa, dia efa teo ambony farafarany ilay zaza maty. Koa nitalaho tamin’i Jehovah i Elisa, ary nanolotra ilay zaza velona tamin’ny reniny.
Ry reny kristiana, nanome zanaka ho anao Andriamanitra. Ny iriny dia ny hananan’izy ireny fiainana mandrakizay, fa tsy ny hahavery azy. Nefa ianao tsy mahay mampita izany amin’izy ireo, fa ny Tompo ihany no mahavita izany. Antsoy ho ao an-tranonao ny Tompo Jesosy -Elisa no kisarisariny, ao amin’io tantara io. Tokony hanana ny «efitrano keliny manokana» ao an-tokantranonao Izy.